Warning: Declaration of ArticleComments::getPostComments($artid, $order = COMMENT_ORDER_NEWEST_FIRST, $status = COMMENT_STATUS_ALL, $page = -1, $itemsPerPage = DEFAULT_ITEMS_PER_PAGE) should be compatible with CommentsCommon::getPostComments($artid, $order = COMMENT_ORDER_NEWEST_FIRST, $status = COMMENT_STATUS_ALL, $type = COMMENT_TYPE_ANY, $page = -1, $itemsPerPage = DEFAULT_ITEMS_PER_PAGE) in /home/blaogycom/public_html/class/dao/articlecomments.class.php on line 30
Warning: Declaration of ArticleComments::getNumPostComments($artId, $status = COMMENT_STATUS_ALL) should be compatible with CommentsCommon::getNumPostComments($artId, $status = COMMENT_STATUS_ALL, $type = COMMENT_TYPE_ANY) in /home/blaogycom/public_html/class/dao/articlecomments.class.php on line 42
Warning: Declaration of ArticleComments::getComment($id) should be compatible with CommentsCommon::getComment($id, $type = COMMENT_TYPE_ANY) in /home/blaogycom/public_html/class/dao/articlecomments.class.php on line 62
Warning: Declaration of ArticleComments::getBlogComments($blogId, $order = COMMENT_ORDER_NEWEST_FIRST, $status = COMMENT_STATUS_ALL, $searchTerms = '', $page = -1, $itemsPerPage = DEFAULT_ITEMS_PER_PAGE) should be compatible with CommentsCommon::getBlogComments($blogId, $order = COMMENT_ORDER_NEWEST_FIRST, $status = COMMENT_STATUS_ALL, $type = COMMENT_TYPE_ANY, $searchTerms = '', $page = -1, $itemsPerPage = DEFAULT_ITEMS_PER_PAGE) in /home/blaogycom/public_html/class/dao/articlecomments.class.php on line 78
Warning: A non-numeric value encountered in /home/blaogycom/public_html/class/database/pdb/drivers/pdbmysqldriver.class.php on line 42
Warning: Declaration of PatternLayout::format(&$message) should be compatible with & Layout::format(&$message) in /home/blaogycom/public_html/class/logger/layout/patternlayout.class.php on line 119
Politika fanorona: Resin-d Ravalomanana Marc aloha izao i Andry Rajoelina | Hevitra MPANOHARIANA |
Politika fanorona: Resin-d Ravalomanana Marc aloha izao i Andry Rajoelina
2009-01-21 @ 21:52 in Politika
tsy valintafo io labasy hitanao io fa tafo
Antony vitsivitsy no ahafahako milaza io toe-javatra io. Alin'ny alarobia 21 janoary 2009 izaho no manoratra aminareo. Nahatsiaro ny anaran'ny bolongako tany amin'ny blogger aho amin'izao fotoana izao, indrindra fa mihamafana indray ny taimbava politika. Mamantsy i Andry dia mamaly i Marc, anjaran'i Andry amin'ny Sabotsy indray ve? Ny fanorona manko tsy tahaka ny echec fa afaka mitohy mamely hatrany ny iray raha mbola afaka mamely na tiany ny mamely ny andaniny na mijanona antenantenany izy, tsy maintsy mihinana anefa raha misy ny azo hanina fa tsy afaka mijanona hoe izaho tsy hihinana. Isaky ny sabotsy ihany ve i Andry sy ny tariny no mametraka ny vatony fa ny andro hafa kosa anjaran'i Marc sy ny ekipany? Izany hoe mampihinam-bela ve i Andry? Inona no ho vitany indray mihetsika, andro iray dia ny sabotsy? Heveriko aloha fa voa i Andry eo amin'izay lafiny izay! Eo ihany koa ny toetr'andro izay nifanojo tamina rivo-doza roa aloha amin'izao fotoana izao.
fenoy rano io tafo io dia ho hitanao ny lozanao
Faharoa, finoanoam-poana: mbola tsy afaka amin'ny Malagasy aloha io amin'izao fotoana izao. Misy mihintsana ny soratra hoe Antananarivo narantiranty tery Ampamarinana. Nisy rivotra mahery hoe dia niendaka ny sasany, tsy mampino ihany aloha e! tsy maintsy hieritreritra hoe sabotazy kosa io. Toy izany ihany koa, nisy hazo nianjera tao amin'ny kianjan'ny demaokrasia, noho ny fahanterany mazava loatra (tatitra heno tamin'ny radio tana, kidaona maraina) nefa misy manadrohadro hoe "lazao fa sabotazy ihany koa e!"; eo indrindra isika, fambara zavatra amin'ny hafa hatrany ny zavatra toy izany na dia tokony ho tsy misy dikany aza. Eo amin'ny toe-tsaina minomino foana mbola ananan'ny maro dia mbola fampitandremana aloha izay, velona ny fanontanana anaty hoe hotohizana ve ny tolona? (hafa isika mpiserasera manam-pahaizana an!)
Ity lafiny fahatelo ity dia raisiko manokana. Efa rentsika ihany fa nianjera ny tafon'ny sehatra saiky hanaovana kianjan'ny mpihira gasy, izay vao notokanana tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nilaza ny andaniny fa manify loatra ny rindrina no antony, tsy ekeko io fa rindrina 22 ihany ilay izy fa tsy 11 tsy akory rehefa hita ny sary. Laviko ihany koa anefa ny filazana fa nohozongozonin'ny mpiambina an'i Marc ny tafo na hoe nisy poteau nendahina no nampianjera ny tafo, niovaova ihany moa ny fiampangana fa anjarany izany. Tsotra ihany ny fanazavana:
Afaka manamarina any amin'ny iarivo-town isika raha tsy tafavoakako ny sary, jereo tsara fa labasy ny tafo nanaovana ny lampivato; io no fahadisoana, izany hoe teo amin'ny famolavolana ny trano no fahadisoana fa tsy hoe tanjaky ny rindrina na hoe sabotazy ihany koa. Raha natao labasy io tafo io dia tokony ho mora very ny rano avy aminy ary hihenjana ilay tafo (jereo ny an'Antsahamanitra) sady tsy atao manakaiky ny marindrano ny fametraka azy; fa tsy mivalombalona mora iangonan'ny rano ka mahatonga ny fisiana dobondrano ambony tafo. Ataoko fa azonareo avy hatrany ny tiako lazaina. Rehefa avy ny orana dia miangona amin'izay faritra ambany ny rano, ny labasy anefa tsy tatera-drano loatra ka tsy hitsika io. Vokany, lasa mavesatra ilay tafo satria mavesatra noho ny beton anie no zakainy e! Tsy mety maina mihitsy ny rano miangona ao, koa raha adinon'ny mpikarakara ny manosika (manary) ny rano avy aty ambany dia ao mandavataona io. Tsy atao mahagaga noho izany raha indray nianjera ny tafo satria be loatra ny rano teo amboniny. Averiko indray, fahadisoana teo amin'ny famolavolana ny nanaovana ny tafo ho labasy ary mbola hianjera foana io raha mbola ifikirana tsy hanovana azy ho fanitso na beton avy hatrany. Asa! mbola tenim-pankahalana hatrany ve ny ahy?
Fahatelo sady aleo faranana ny resaka, toy ny tsy afa-mihetsika fa ambenana toy ny managadra tena sahady i Andry rehefa ankalazaina fatratra izao siosion-dresaka hisamborana azy izao. Maro dia maro ve ny olona vonona hanolo-tena hiaro azy? tsy ho reraka ve ireo? Tadidio tsara, tamin'ny Sabotsy dia saiky handeha an-tongotra ny tenany hiditra ny kianjan'Ambohijatovo saingy noho ny raharaha dia niangavian'ny mpiambina izy hiditra ny fiara satria lasa sarotra dia sarotra ny miaro azy.
Tsy ho mora noho izany ny miambina azy rehefa eny an-dalana izy. Noho izany, sarotra ny ifampiresahany amin'ny vahoaka afa-tsy amin'ny toerana azo antoka amin'ny fiarovana. Etsy ankilan'izany anefa, noheverina ihany fa tsy ho sahy hivezivezy an'Antananarivo intsony izao Marc izao fa dradradradraina ho tsy tian'ny olona intsony ka mety ho voaompa (sa voatoraka kiraro?) kanjo dia ny eny ambany tanàna araka ny filaza no nandehanany. Nahay nihetsika i Marc androany satria tsy nihazakazaka nankany anindrana izy ka hoe tsy raharahako izay Antananarivo. Endrika fampifanoherana tahaka izany hatrany manko no narangaranga raha vao misy voina any ivelan'Antananarivo tokony handehanan'ny mpitondra fanjakana ka mety hahatonga ilay fihevitra fa zanak'Ikalahafa ny eto Antananarivo rehefa tsy nifidy izay napetrany hofidiana.
Noho izany, tokony hanana paik'ady matotra ny tariky Andry raha te-hahazo olona hafa tsy mankeny Ambohijatovo. Raha mahavita aza izy dia hiezivezy an'Antananarivo mihitsy ny asabotsy rehefa tsy afaka ihany ny andro hafa. Hevitra ihany ny ahy fa raha mbola lazaina ho fankahalana ihany dia tsy hitako intsony. Raha toa indray moa ka hitanao ny lafiny hitanao fa i Andry no mahazo vahana aloha eo amin'ny politika fanorona amin'izao fotoana izao dia apetraho ary ny hevitrao.
Fanamarihana: Misy ny mitaraina fa misy tsy mety ny fametrahana hevitra, fantatro tsara izany. Ny tsotra indrindra hitako aloha dia izao: Rehefa vita vaky ny lahatsoratra dia tokony ho vonona ihany koa ny lahatsoratra raha lavalava mety ataonao dia "actualiser"-o aloha ny lahatsoratra, ankotrihina hoy aho izay dia adika (copier) ilay lahatsoratra novononinao dia soratana ny anarana na solon'anarana ary averina ny marika lazain'ny Authimage dia alefaso amin'izay. Enga anie ho tafitra ny hafatrao!
jentilisa 21 janoary 2009